E-azụmahịa weebụ nche | ECommerce ozi ọma
Ecommerce webụsaịtị nchekwa
E-azụmahịa na ebe nrụọrụ weebụ Ha aghaghi ime ihe nchebe nile di nkpa iji mee ka nchebe nke ndi ahia ha na ihe omuma ha.
N'echiche a, ọzọ anyị chọrọ gị kekọrịta ụfọdụ ndụmọdụ nchekwa kacha mma maka weebụsaịtị Ecommerce.
1 Họrọ ikpo okwu ecommerce echekwara
2 Jiri njikọ dị nchebe maka ịzụrụ n'ịntanetị
3 Echekwala data dị nro
4 Jiri usoro nkwenye adreesị
5 Na-achọ ike okwuntughe
6 Isi ihe ndị na-eme ka nchekwa nke eCommerce gị
6.1 PCIkpụrụ PCI
6.2 Jiri nchebe ọzọ
6.3 Gaa na saịtị gị gaa HTTPS
6.4 Tọọ mkpu
6.5 Nwelite oge niile
6.6 Debe nche na-aga n'ihu
7 Etu ị ga-esi mara ma ọ bụrụ na eCommerce gị enwee nsogbu nchebe
Họrọ ikpo okwu ecommerce echekwara
Ọkacha mma iji a e-azụmahịa platform ebe ndị na-agba ọsọ anaghị enwe ike ịnweta ndị nchịkwa ma ọ dị naanị na netwọkụ nke ụlọ ọrụ wee wepu ya na sava ọha na eze.
Jiri njikọ dị nchebe maka ịzụrụ n'ịntanetị
Akwadoro ka iji usoro ogbugba ndu dika Ebe nchekwa dị nchebe (SSL) maka nyocha weebụ na nchebe data. Nke a na-echebe ma ụlọ ọrụ na ndị ahịa ma na-egbochi ndị si mba ọzọ inweta ego ma ọ bụ ozi dị mkpa. Kasị mma, jikọọ EV SSL (Extended Validation Secure Sockets Layer), ka ndị ahịa wee mara na ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ echedoro.
Echekwala data dị nro
Ọ dịghị mkpa chekwaa ọtụtụ puku ihe ndekọ ndị ahịa, ọkachasị nọmba kaadị kredit, ụbọchị mmebi ma ọ bụ akara CW2 (Kaadị nkwenye Kaadị). Akwadoro ka ihichapụ ihe ndekọ ochie na nchekwa data ma debe obere ozi, zuru oke maka ebubo onye ọrụ na nkwụghachi.
Jiri usoro nkwenye adreesị
Jiri a Adreesị nkwenye System (AVS) na Nyocha Uru Uru Kaadị (CVV) maka azụmaahịa kaadị akwụmụgwọ ma si otú a belata ụgwọ aghụghọ.
Na-achọ ike okwuntughe
Ọ bụ ezie na ọ bụ ọrụ dịịrị ndị ndị na-ere ahịa na-echekwa ozi ndị ahịaỌ dịkwa mma ịchọrọ ka ha jiri okwuntughe siri ike. Aha njirimara ndị toro ogologo na okwuntughe nbanye dị mgbagwoju anya na-eme ka ọrụ ahụ sikwuoro ndị omempụ cyber ike.
Isi ihe ndị na-eme ka nchekwa nke eCommerce gị
Na-echeba ịrị elu nke eCommerce ma ọ bụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, nakwa na ọtụtụ ndị mmadụ na-amalite ịzụrụ ihe n'ịntanetị, o doro anya na ịchọrọ ụlọ ahịa gị ka nchekwa dị ka o kwere mee. Na, ndị hackers nọ ebe ahụ, ọ bụ ezie na ị nwere ike iche na azụmahịa gị adịghị mkpa maka ha ịnwa ịnweta data ị na-echekwa, ị ga-enye nchekwa na data ahụ dị nro. Ha bụ data nkeonwe nke ndị ahịa na, ọ bụrụ na ọnya dị, ị nwere ike ịkwụsị ntụkwasị obi ha (na-eme ka ha ghara ịzụta n'aka gị maka ụjọ na a ga-ekerịta data ha na Internetntanetị (ma ọ bụ na weebụ gbara ọchịchịrị).
Ya mere, na mgbakwunye na ihe niile dị n'elu, anyị na-adụ gị ọdụ ka ị closeaa ntị nke ọma:
Ọ bụrụ na ị maghị, ụkpụrụ PCI DSS, makwaara dị ka Industrylọ Ọrụ Cardkwụ mentgwọ --gwọ - Securitykpụrụ Nchedo Data Ọ bụ "iwu" ka eCommerce mezuo. Nke a dabere na ịmepụta ụkpụrụ maka nzukọ ndị ga-ahazi, chekwaa ma nyefee data ndị nwe kaadi.
Nke ahụ bụ, ọ na-enyere aka zoo data ahụ ka ọ ghara ịgụ ya ma ọ bụ ka e wee “zuo ohi” ya. Ee ee, ị ga-erubere iwu isi n'ihi na ọ bụrụ na ịmeghị ya ma ha achọpụta, ha nwere ike inye gị ma tinye nra nke ga-adị oke elu.
Jiri nchebe ọzọ
Ogbugba ndu nke na - enyere aka tinye usoro nkwenye. Ee, ha nwere ike ịdị na-agwụ ike ma na-eme ka ndị ahịa na-emekwu ihe; ma nloghachi ị ga-enye ha nche nile ha chọrọ iji zụta n’ụlọ ahịa gị. N'ezie, ka ha wee mara nke ahụ, ọ dị mkpa ka ị gwa ha, ebe ọ bụ na, ma ọ bụghị, ha agaghị ama ma ha nwere ike ịtụkwasị obi ma ọ bụ hapụ nzụta ọkara n'ihi na ike gwụrụ ha maka usoro ndị ahụ.
Otu na Anyị nwere ike ịkwado 3-D Secure, usoro iwu maka kaadị Visa na MasterCard nke na-enyere aka ịgbakwunye usoro nkwenye, nke mere na ọ dịghị ụgwọ ịkwụ ụgwọ na-enweghị onye ahụ maara n'ezie banyere ya. Ọ dị ka PIN na-ezigara onye nwe kaadị na ha ga-abanye iji mezue iwu ahụ (ọ bụrụ na ha emeghị ya, a kagburu iwu ahụ ma ọ dị ka ha agaghị eme ya)
Gaa na saịtị gị gaa HTTPS
Afọ ole na ole gara aga, a na-eji HTTPS naanị maka akụkụ ịkwụ ụgwọ nke weebụsaịtị. Ugbu a, nke a, yana asambodo SSL na-ejedebeghị na ibe weebụ ahụ, mana ọ niile. Ebumnuche bụ ichebe weebụ niile megide nsogbu ọgụ.
Yabụ ugbu a ị nwere ike akwaga saịtị gị na HTTPS na akwụkwọ SSL gị iji nye nchebe ka ukwuu. Ọ bụrụ na ịmaghị otu esi eme ya, ịnwere ike ịjụ ndị ọbịa gị ka ọtụtụ ndị na-enye ọrụ a.
Oti mkpu na eCommerce? N'ezie? Ee ee, anyị emehieghị. N’ụzọ doro anya, ọ gaghị adị ka n’ụlọ ahịa anụ arụ; ma Mkpu dịkwa maka ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. Ihe ọ na-eme bụ kọọ ọrụ na-enyo enyo, dịka ọmụmaatụ, azụmahịa na otu IP ọtụtụ ugboro, ma ọ bụ iwu dị iche iche emere maka otu onye mana jiri kaadị kredit dị iche iche.
Ọ bụrụ na nke ahụ emee, ha na-ezitere gị email na-adụ gị ọdụ ma ị nwere ike ịkpọtụrụ onye ahụ iji nyochaa ihe na-eme ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe ha jiri nlezianya mee ma ọ bụ enwere mperi.
Nwelite oge niile
Dị ka ọ dị, ụlọ ahịa dị n'ịntanetị dabere na usoro, ọ bụrụ Prestashop, WordPress ... Ọfọn, usoro ndị a na-emelite kwa oge ọ bụla n'ihi na ha na-agbanwe faịlụ iji nwee nchebe mgbe niile.
Ya mere, ọ na-adaba adaba na melite oge niile ka usoro ahụ ghara ịpụ (ebe ọ bụrụ na enwere mmelite ọ nwere ike ịbụ n'ihi ụfọdụ mmebi iwu a ga-edozi, ma ọ bụrụ na ịmeghị, ị nwere ike ịnweta ihe egwu na ha ga-anwa izuru ozi eCommerce gị).
Debe nche na-aga n'ihu
Ọ dị mkpa na, dịka na ụlọ ahịa anụ ahụ ị nọrọ na nche maka ihe niile iji tụlee nsogbu nchekwa, ị na-eme ya na ụlọ ahịa gị n'ịntanetị. Iji mee nke a, anyị na-akwado ka ị mee na-enyocha kwa ụbọchị, na kwa di na nwunye n’ime ha n’oge ike, dịka ekeresimesi, ụbochị inepo, ụbọchị nne na nna, ezumike, wdg.
I kwesịkwara lelee usoro antivirus gị, yanwa ngwa nchekwa ndị ọzọ etinyere.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị ga-ahụrịrị na ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma yana enweghị nsogbu.
Buru n'uche na eCommerce gị bụ ọrụ gị yana data ndị ahịa na-ahapụ na ya ga-abụ ọrụ gị iji kpuchido ha, yabụ, ọ bụrụ na ị daa, ị ga-emebi ndị ọrụ gị ihe oyiyi gị.
Etu ị ga-esi mara ma ọ bụrụ na eCommerce gị enwee nsogbu nchebe
Ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe anyị ga-achọ, ma ọ nweghị onye nwere eCommerce ga-achọ ịchọta onwe ya n'ọnọdụ a, ịkwesịrị ịdị njikere ma ọ bụrụ, mgbe, ị chọpụta na ị nwere nsogbu nchebe. ihe a ga-eme nke ahụ? Ọ nwere ebe a ga-ekwurita ya? Kedu ihe ị ga-eme?
Izu Ike, anyị ga-enye gị usoro ndị dị n'okpuru.
Mgbe eCommerce gị nwere nsogbu nchekwa, ihe na - eme bụ na data ndị ahịa gị nwere ike imebi, ya bụ, mmadụ nwere ike iwere ha. Tupu nkea, ị ga - edenye ya na Registry Incident ma mezie ya. Ma ugbu a, na Iwu Nchedo Data, ị kwesịrị:
Gwa Agencylọ Ọrụ Nchedo Data.
Zigara ndị nwere mmasị ozi email (ndị ahịa gị) na-adụ ọdụ ihe megoro). Anyị maara na ọ gaghị adị mma, mana ọ ka mma ịghara ịnwa izochi nke a mana ime ka amara ya ngwa ngwa ka ndị ọrụ nwee ike ịnye onwe ha na mwakpo enwere ike.
Dozie ọdịiche ahụ ozugbo enwere ike. Ndị ọchịchị ga-ahụ maka ịchụ ndị omempụ na data nwere ike ịbụ nke ezuru gị, mana ị ga-edozi nsogbu nchekwa ahụ ozugbo enwere ike. Ọ bụrụ n’inweghị ihe ọmụma kwesịrị ekwesị, anyị na-atụ aro ka ị tụkwasị obi ndị ọkachamara ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-enye gị ohere ịnweta eCommerce “ọkụ ọkụ”. Ma, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị kwenyeghị ya, nke a dị mkpa iji hụ na aha gị na becausentanetị n'ihi na, ọ bụrụ na i kwenyeghị, ị chere na ndị ahịa ugbu a ga-atụkwasị gị obi?
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Ahịa ahia » Ecommerce webụsaịtị nchekwa
Kedu ihe bụ Google Trends
Kedu ka ahịa eletrọnik si arụ ọrụ?